रोनाल्डोले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने ! | Jukson
रोनाल्डोले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने !
११ चैत, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगामा सेल्टाविरुद्ध गोलको खुशी मनाउने क्रममा टिसर्टभित्र फुटबल लुकाएका रियल मड्रिडका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेट बोकेकी महिला झैं देखिए थिए । ठिक यति नै बेला उनी अर्को बच्चाको तयारीमा रहेको समाचार बाहिर आएको छ ।
पोर्चुगलका मिडियाले रोनाल्डो अर्को एक बच्चाका लागि ‘सेरोगेट’ आमासँग करार गर्ने प्रक्रियामा रहेको सार्वजनिक गरेका हुन् । गत क्रिसमसमा अमेरिका भ्रमण गर्दा उनले यसका लागि कागजी कामहरु अघि बढाएको समाचारमा जनाइएको छ । अर्काे बच्चाका लागि उनले १० लाख यूरो छुट्याएका छन् ।
रोनाल्डोको ६ वर्षका छोरा छन् । तर, उनको आमा को हुन् भन्ने रोनाल्डोले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । छोराको जन्म भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको घोषणा गर्दै उनको आमाको पहिचान गोप्य राख्ने बताएका थिए ।
ग्यासका बुलेट रोकेर कावासोतीमा उपभोक्ताले गरे प्रदर्शन